Mitovy fa tsy sahala | NewsMada
Mitovy fa tsy sahala
Par Taratra sur 11/09/2018
Ao anatin’ny dingan’ny hazakazaka arahin-tosika tanteraka ny kandidà mpilatsa-kofidina, ankehitriny. Raha jerena ety ivelany, azo lazaina fa mitovy sata mifehy ny tsirairay satria samy tsy misy mitana tompon’andraiki-panjakana ambony intsony, raha raisina ny an’ny filoha teo aloha, Rajaonarimampianina, afa-tsy Rakotomamonjy Jean Max, afaka mijanona ho filohan’ny Antenimierampirenena. Tsy misy afaka mampiasa fitaovam-panjakana intsony satria efa noteren’ny praiminisitra haverina ho miloko mena ny takelaka milaza ny laharan’ny fiaram-panjakana rehetra. Efa fiovana lehibe miohatra amin’ny fifidianana nisy teto hatramin’izay ireo voalaza ireo.
Endriny ihany anefa izany fa maro ny maha samy hafa ny tsy fitoviana eo amin’ny samy kandidà raha jerena ny ao anatiny. Samy manana ny mpanohana azy avy, na samy tsy miteny na mivaky aza ny tsirairay. Ao anatin’izany ny vola sy ny fitaovana ampiasaina mandritra ny fampielezan-kevitra. Tsy misy rahateo ny lalàna na fepetra mamaritra ny fiavian’ny volan’ny kandidà, na avy eto an-toerana na avy any ivelany. Tsy misy lalàna mamaritra ny habetsahan’ny vola ampiasaina, indrindra ny fetra farany ambony.
Mihevitra ny ho lany avokoa ny kandidà 36. Samy mampiseho ny heriny sy ny tanjany, saingy tsy misy tena mahalala ny vokatra. Hita ny « famafana ny lalana » nataon’ny kandidà efa nitety faritra mialoha ary andalovan’ny hafa indray aty aoriana.
Tsy misy ny fitsapan-kevi-bahoaka eto amintsika, sady tsy azo antoka ny vokatra avoakan’izy ireny satria tsy mahasahana ny tena sokajin’ny mpifidy, ny toerana misy azy avy, ny asany, sns. Azo amboarina ihany koa izy ireny, entina hanamboarana ny sain’ny vahoaka sy ny mpifidy. Mbola tratran’ny toy izany aza ny any amin’ny firenena mandroso, toa ilay fiheveran-dRtoa Clinton, avy amin’ny antoko demokraty, fa ho azony ny fandresena kanjo nifamadika, resin’i Trump avy amin’ny antoko repoblikanina.